Zorin OS 15.1 inosvika ichivandudza mashandiro eLibreOffice, pakati pevamwe | Linux Vakapindwa muropa
Mukutanga kwaJune, Zorin Nharaunda yakakanda inogadziridza kune yako sisitimu yekushandisa kuti uwedzere zvitsva zvakadai seZorin Connect. Zorin Unganidzo inzira yekubatanidza yedu Android foni kuPC yedu uye yakavakirwa pa KDE Unganidzo uye GSConnect. Nhasi, Zorin adzoka munhau, mune iyi nyaya ye Zorin OS 15.1, vhezheni nyowani iyo pakati pezvinhu zvayo zvitsva ine yakagadziriswa Unganidzo sezvaungaona muGIF yakaburitswa mu kusunungura chinyorwa yeiyo inoshanda system.
Chimwe chitsva cheiyo nyowani vhezheni yacho ndechekuti yave yakavakirwa paUbuntu 18.04.3. Isu tinorangarira kuti Zorin OS v15 yaive yakavakirwa paUbuntu 18.04.2. Uyezve, ivo vakagadziridzawo kernel, inova Linux 5.0. Pazasi iwe une pfupiso yenhau dzakakurumbira idzo dzakaburitswa nechikwata cheZorin pane webhusaiti yepamutemo.
Zorin OS 15.1 Zvinoratidza
Kubva paUbuntu 18.04.3.
Zorin Batanidza kuvandudza. Zvino, iyo slide basa rinosanganisira pointer inopindura mafambiro efoni, hongu, kana iyo terminal iine inodiwa sensor (accelerometer uye / kana gyroscope?). Izvo zvakare zvinokutendera iwe kudzora kutamba kwemamwe mapurogiramu.
Yakavandudza kuenderana uye kuita muLibreOffice, iyo iri yekuti ndeyekuti vakasanganisira LibreOffice 6.3.
Yakagadziriswa mashandiro emitambo yemavhidhiyo nekutenda iyo GameMode modhi, izvo zvinoita kuti vamhanye nekukurumidza kupfuura nakare.
Dzimwe sarudzo dzekugadzirisa: Sarudzo inoshandura dingindira otomatiki ikozvino inogona kurongedzwa nemawoko.
Mutsva mutsva: Sans Forgetica.
Kuita, chengetedzo, uye kugadziridza kwekuenderana zvakawedzerwa.
Zorin OS 15.1 ikozvino iripo kubva Iyi link. Iyo ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kune vashandisi vanoda kushandisa sisitimu yekushandisa isina kunyatsosiyana neWindows uye iyo vhezheni itsva yasvika panguva chaiyo Microsoft isati yasiya rutsigiro rweWindows 7. Kana iwe uri mushandisi weWindows: enda kuLinux nekuda kwekufa kweWindows 7 uye kusvika kweZorin OS 15.1?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zorin OS 15.1 inosvika pamwe nekuvandudzwa muZorin Unganidzo uye kuita kuri nani muLibreOffice